Indlela yokwenza ikhekhe kusuka ezinhlakeni ngokwakho: izithombe nezinyathelo ezithathwe ngesinyathelo
Ikhekhe kusuka ezindizeni ngokwakho - isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo ngesithombe
Uma ufuna ukuhalalisela ekuzalweni kwemvuthuluka, yenza okwejwayelekile kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo kusetshenziselwa ikhekhe lesipho samama-amasila. Lelikhekhe ngokuqinisekile liyamangala umama osemusha futhi ligcine amandla alo ukunakekela ingane.
Ikhekhe lama-diapers lingacelwa umfana nomntwana.
Izinto ezidingekayo namathuluzi
Namuhla ungathenga ngisho namaqebelengwane aseqoqwe kakade kusuka kumabhoyizi, kodwa kumnandi futhi angabizi kakhulu ukwenza isipho esinjalo ngezandla zakho, ukufaka ngemuva kwesinye isidumbu esingeziwe, esisebenzisekayo noma ithoyizi yezinhlanzi. Ungakwazi ngaphezu kwalabadayi ukuthenga okuthile kusuka izimonyo zezingane, amasokisi kanye nezingubo. Kunoma yikuphi, uma ungazi ukuthi yini ongayinika ngaphandle kwama-diapers, ungakwazi ukuhlobisa ikhekhe nge-rattle noma ibhodlela, noma yikuphi okuyoba usizo. Uzodinga ama-diapers (izingcezu ezingaba ngu-80) kanye ne-tape ukubopha ikhekhe. Ukuze ungalingani nobukhulu bama-diapers, kufanele bakhethwe ngokusekelwe kwesisindo somntwana. Kungcono ukuthatha usayizi ongu-1 ngaphezulu. Uma kunokwenzeka, zama ukuthola ukuthi yiziphi abazali abakwa-brand pampers abazisebenzisayo. Ezimweni ezimbi kakhulu, khetha umkhiqizi, okuyiwona wonke amabuyekezo abuhle. Kumele ucabange nokuthi uzozifaka kanjani izindiza ngokwama-rolls. Siza ukufaka ama-peapers amaphegi, ucingo noma ukudubula.
Imfundo yesinyathelo-nge-sinyathelo yokwenza ikhekhe kusuka kumathayidi
Abantu abaningi bakholelwa ngephutha ukuthi ukwakha ikhekhe elihle kuma-diapers izandla zakho zidinga amakhono akhethekile. Empeleni, ngokulandela imfundo elula-ngesinyathelo, ungakwazi kalula ukudala ubuciko obunjalo. Kodwa kubalulekile ukwenza ikhekhe egumbini elihlanzekile futhi kuphela ngezandla ezihlanzekile ukugcina inhlanzeko.
Kubalulekile ukugcina uhlelo lombala. Ngakho-ke, ukwakha ikhekhe lentombazane esanda kuzalwa, ungathatha ama-pink diapers. Indlela yokwenza ikhekhe lentombazane njengesinyathelo ngesinyathelo ngesipho:
Okokuqala udinga ukuguqula ama-diapers emigqumeni. Ukuze wenze lokhu, i-diaper ngayinye isontekile futhi ivikeleke eceleni kocingo nge-clothespin noma ifakwe emaqenjini amabili ahlanganisiwe phezulu nangaphansi kwe-roll.
Khona-ke kufanele uthathe umbuthano onamandla wekhadibhodi, ububanzi bayo obulingana nobubanzi bekhekhe elizayo. Phakathi nendawo yombuthano, induku yamakhadibhodi ihlanganisiwe. Lokhu kungaba yisisekelo esingenalutho samaphilisi wephepha, okuzosebenza njenge-skeleton yekhekhe.
Uma isisekelo soma, kuyadingeka ukubeka nxazonke imiqulu yama-diapers. Lapho yonke indawo igcwele, ama-diapers aboshwe nge-tape futhi ama-texspins noma ama-band bands anqunywa. Manje ingxenye yokuqala yekhekhe izogcina itekisi yokuhlobisa. Ngakho-ke, sibeka zonke izingxenye ezintathu zekhekhe elizayo.
Manje kusele ukuhlobisa ubuciko bethu obuhle. Izakhi zokuhlobisa ziwusizo kuwe. Xhuma ingqondo yakho - phezulu kwekhekhe ungakwazi ukunamathisela imbali enhle yephepha.
Ungaphinda wengeze isipho esinama-booties amancane noma izimonyo zezingane ohlelweni olufanayo lombala njengekhekhe.
Omunye umqondo wekhekhe lentombazane
Ukuze udale ikhekhe kusuka ku-diapers ye-princess, uzodinga i-diaper noma ithawula, izimbali zomhlobiso, ama-diapers ngokwabo (okwanele kuzokwanela iphakethe eliphakathi), imihlobiso, izinsini zama-diapers wokubamba iqhaza kanye namadakhoni emhlobiso. Umqondo wangempela ukwenza ikhekhe lentombazane encane evela kwabaningi, ngokuyihlobisa ngama-rattles kumathoni amnyama. Ngakho-ke, ukwenza ikhekhe lama-pampers ezinganeni njengesinyathelo ngesinyathelo ngesipho:
Ikhekhe lethu njengesipho lizovela kumabili amabili. I-tier yokuqala ibhalwe emigqumeni esontekile ngemigqa. Lokhu kuyoba isisekelo sekhekhe. I-diaper ngayinye ihlanganiswe ne-band elastic.
Ama-pamper avuliwe phansi, alungise uhlangothi ngebhande elikhulu elincanyeni.
Khona-ke isendlalelo sokuqala sigcwele ama-diapers, futhi ngaphezu kwalokho konke kubuye kuhlanganiswe ne-band elastic.
Manje udinga ukwenza ingxenye yesibili yekhekhe. Kulokhu, umqulu noma ithawula lihlanganiswe futhi liboshwe nge-tape. Phakathi kwesigaba sokuqala ibhodlela lesana lifakiwe, futhi ithawula elihlanganiswe phezulu lifakwe kusuka phezulu. Ngakho ungenza ikhekhe lamathrekhi abo amabili, njengoba kubonisiwe esithombeni. Cishe konke, kuhlale nje ukuhlobisa isipho kumntwana osanda kuzalwa.
Manje phezulu kwekhekhe ibeka ipini, sibopha ikhekhe ngebhebhoni bese sihlobisa ngezimbali. Yilokho, isipho sokuqala silungile! Abazali abasha abatsha bayothokozisa kakhulu isethulo esinjalo, futhi ngesikhathi esifanayo kakhulu kakhulu. Engeza isipho - ikhekhe lama-diapers - ungadlala ngamathoyizi.
Siqoqa isipho kusuka kumathayiphi womfana
Isipho esinjalo senziwa ngendlela efanayo nentombazane, kodwa khetha kuphela uhlelo oluhlukile lombala. Kuyoba ngokwanele ukuthi kube namaphakethe we-pampers aphakathi nendawo namathoyizi wokuhlobisa. Indlela yokwenza isinyathelo ngesinyathelo:
Ngesisekelo sebhodlela, futhi nxazonke umshayeli wakhe usakaze izindiza, njengesithombeni. Ungakwazi ukubukela nevidiyo, njengoba kwenziwa. Ungadinga umsizi. Ama-diapers anamathiselwe nge-band elastic. Lona ngumzila wokuqala wekhekhe. Kufanele kube ne-diapers kakhulu.
Senza ingxenye yesibili. Ukwenza lokhu nxazonke phezulu kokubhoboza ibhodlela, njengesithombeni, ama-diapers ambalwa. Sizibophezela nge-band elastic.
Kukhona okuthakazelisayo kunazo zonke - umhlobiso wekhekhe kusuka kumathayidi. Ngenxa yalokhu, ama-Ribbon e-blue azoyadingeka, njengosithombe. Vele ubophe ikhekhe lama-pampers ngamabhange bese uwabopha kahle ngeminsalo.
Cishe konke. Ihlala nje kuphela ukupakisha ikhekhe kumabhilidi ukuya efilimu, ngoba ukuhlanzeka kwengane kubaluleke kakhulu. Vele ubeke ikhekhe esikhwameni sesipho, ukugoqa bese ubopha i-Ribbon elikhanyayo kusuka kulayini, njengesithombeni. Abazali bomfana bayaqiniseka ukuthi bayathokoza ngesipho esihle kangaka, futhi ungakwazi ukuyihlanganisa ngamathoyizi.
Omunye umqondo we-diaper enjalo kusuka kumabhoyi
Ingane ngayinye idinga ama-diapers, kodwa kumele ihanjiswe ngendlela yasekuqaleni ukuze isipho sihle. Kunemibono eminingi yokuthi ungayenza kanjani ikhekhe kumabhilidi ngokwakho, futhi lokhu kungomunye wabo. Uzodinga iphakethe elijwayelekile lama-diapers, amathrebhoni namathoyizi wokuhlobisa. Yenza ikhekhe lama-pamper for the boy step by step:
Ukwenza lokhu ikhekhe kusuka kumathayidi, uzodinga iphakheji elijwayelekile lama-diapers. Okokuqala udinga ukuqoqa zonke izindiza ngezinemiqulu bese uzibopha ngezingqimba ezithintekayo.
Manje kuyadingeka ukwenza isisekelo sekhadibhodi bese unamathisela induku yekhekhe kuso. Ngisho nesitsha esikhulu seplastiki singasetshenziswa. Beka induku yamakhadibhodi ngeglue. Emva kwalokho nxazonke, ama-diapers abekwe ngokuqinile komunye nomunye. Ukwenza umsebenzi ube lula kuzosiza ibhande elisezingeni elingaphansi, lapho kudingeka nje ukuba usule imiqulu. Yenza njengoba kulesithombe.
Uma ufaka umzila wokuqala, qala ukwakha isigaba sesibili. Ngaphakathi kwekhekhe, ungafaka abadwebi noma ibhodlela - abazali bayojabula ukuthola isipho esinjalo.
Uma isigaba sesibili sesilungile, sakha ingxenye encane kakhulu yesithathu, futhi sibopha sonke isakhiwo ngezibhande, njengesithombeni. Ikhekhe seliphelile.
Manje uzodinga amateyipu wokuhlobisa namathoyizi. Amathoyizi angafakwa kuma-different tiers, futhi amathrekhi ahlobisa ikhekhe ngokwalo.
Ihlala nje ukuze wenze umnsalo omkhulu okwesibhakabhaka bese uyilungisa phezulu kwekhekhe.
Ividiyo: indlela yokwenza ikhekhe kusuka kuma-diapers ngokwakho
Ungakwazi ukubukela nevidiyo, eneklasi elihle futhi lapho ichazwa khona isinyathelo ngesinyathelo ukuthi ungayenza kanjani isipho kusuka kumathayi. Ingane ngayinye ayidingi nje kuphela ama-rattles kanye namathoyizi, kodwa futhi nemikhiqizo yokuhlanzeka, kanye ne-original diapers kuyoba isipho esihle kakhulu.
I-crochet yase-Summer yokugqoka
Needlework - ukwenza imikhiqizo yakho
Umshini wokushisa owenziwe ephepheni
Ukudweba kwendwangu: i-batik, ubuchwepheshe
Izipho ezivela ku-chocolates ngezandla zakho: imibono engcono kakhulu ngesithombe
Indlela yokuthunga i-apron
Izinyawo nezandla zipholile kubanda
Amaski ebuso okuvuselela ekhaya
Ukuphulukiswa nemikhiqizo ye-jadeite
Londoloza umumo ngemuva kokuphela kokudla
Uma umyeni enqaba umkakhe ngezocansi
Ukupheka - ukupheka zokupheka
UVera Brezhnev wasabela ngokuzumayo ekugxekeni kokubukeka kwakhe
Izitayela zangaphakathi zekwindla-2016: ingxenye ezimbili
Ukudla okusheshayo okuvela ku-Alla Pugacheva
Ukuphupha ngengubo ebomvu. Incazelo evelele yamaphupho
Indlela yokuqinisa isikhumba ngaphandle kokuhlinzwa
Ukuhlanzeka okuhlanzekile nokunethezeka
I-Pot Pot Pie